Ahlusunna oo shaacisay in ay ku wareejisay dowladda hubkii iyo gaadiidkoodii | SMC
Home WARARKA MAANTA Ahlusunna oo shaacisay in ay ku wareejisay dowladda hubkii iyo gaadiidkoodii
Taliyaha Guutadda 15-aad Gen Mascuud Maxamed ayaa gacanta ku haya Madaxda Ahlusunna ka dib markii ay isku dhiibeen.
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Masuuliyadii Amnigooda , tii Magaalada Dhuusamareeb iyo masuuliyada Hubkoodii iyo gaadiidkoodiiba ay Ku wareejiyeen General mascuud Maxamed Warsame oo ah Taliyaha Guutada 15-aad ee Qaybta 21-aad horayna u ahaa Taliyihii Ciidamada Ahlusunna ka hor intaan la qarameyn ciidamada.
Qaar ka mid ah Saraakiisha Ciidanka dowladda ee ku sugan Dhuusamareeb ayaa wadda dadaallo kala duwan oo la doonaayo in lagu kulansiiyo Madaxweyne Qoor Qoor iyo Hoggaanka Ahlusunna.
Ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegay xarunta INJ ee Magaalada Dhuusamareeb oo ay ku sugnaayeen Madaxda Ururka Ahlusunna.
Xaaladda Magaalada ayaa ah Mid degan, inkastoo ay jiraan cabsi ku aadan Kacdoon dadweyne oo laga cabsi qabo.
Previous articleDaawo DEG DEG: dagaal culus oo ka qarxay Magaalada Dhuusamareeb
Next articleXildhibaanada Koonfur Galbeed ee lasoo xulayo oo laga rabo lacag diwaangalin ah